Daawo sawirrada dowlada Soomaaliya oo lagu wareejiyay maleeshiyaad iyo hub badan oo magac diimeed ku howl geli jiray.
Munaasabad ballaaran oo dib loogu furayay Xerada Ciidamada Xoogga dalka ee 21-aad ee Magaalada dhuusa-mareeb ayaa Gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay Dhismaha xaruntaas oo ku taalla magaalada dhuusa-mareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud.
Waxaa si rasmi ah xarigga uu uga jaray dib u furitaanka Xerada Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Gen.C/Risaaq Khaliif Cilmi ,waxaana munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa,Saraakiisha Taliska Xoogga dalka ee 21-aad,Saraakiisha sarsare ee Ahlusunna Waljamaaca ,Odayaasha Dhaqanka,siyaasiyiin iyo martisharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda.
Munaasabadda ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay Guddoomiyaha saddexda Gole ee Ahlusunna Waljamaacad Sh.Ibraahim Sh.Xasan Guureeye, waxa uuna xusay in wixii ka dambeeya xilligaan Ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ay ku biireen Ciidamada Xoogga dalka islamarkaana ay ka qeybqaadan doonaan hirgelinta Nidaamka Dowladnimo ee Gobollada Dhexe ee dalka.
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka General c/risaaq Khaliif Cilmi oo maanta ka hadlay Munaasabadda ayaa ugu horreyn waxa uu salaam sharaf uu ka siday madaxda Qaranka Somalia guddoonsiiyay Ciidamada Ahlusunna ee maanta si rasmi ah ugu biiray Ciidamada Qalabka sida ee Dowladda Somalia,isagoo ballanqaadey in Taliska Xoogga dalka uu dammaannad qaadayo bixinta Xuquuqda ay leeyihiin Ciidamada Ahlusunna ee maanta la midoobay Xoogga dalka, waxa uu intaasi sii raaciyay abaanduuluhu in Labo neef oo Geel ah loo qalayo Ciidamada Ahlusunna ee kamid noqonaya Xoogga dalka.
Generaalku waxa uu tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya ay Ciidamada lagu xareynayo Xerada ay kala mid noqonayaan Ciidanka Xoogga dalka dhinacyada Xanaaneynta,Qalabeynta,Taakuleynta,Xuquuqda iyo waajib siinta Ciidamada Qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somalia.
Sargaal sare oo katirsan Dowlada oo sheegay in uusan aqoonsaneyn Xildhibaan iyo Wasiir halka uu tix galin u hayo Hay’adaha Shisheeye.
Jen Cali Xirsi (Cali gaab) oo ah Taliyaha nabad galyada Wadooyinka Gobolka Banaadir ayaa maanta si cad u sheegay in uusan aqoonsaneyn Xildhibaan iyo Wasiir katirsan Dowlada balse uu aqoonsan yahay kaliya shaqadiisa .
Cali Gaab oo xiliga warkaan uu sheegayay ku sugnaa laamiga aada Garoonka Diyaardahaa Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho halkaa uu gawaarida u diidayay in ay maraan ayaa waxaa halkaasi soo maray gawaari ay saarnaayeen Masuuliyiin katirsan Dowlada balse uu Cali Gaab u diiday in ay maraan laamiga taa badalkeedana ay maraan Wadooyin qardo jeex ah oo noloshooda halis galin kara Masuuliyiinta Dowlada.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka oo gawaari ay wateen uu Cali Gaab laamiga u diiday in ay maraan ayaa waxa ay u sheegeen Cali gaab in ay yihiin Masuuliyiin katirsan Dowlada ayna doonayaan in ay laamiga maraan balse Taliyaha uu Xildhibaanadaasi si jees jees ugu jawaabay.
‘’Xildhibaan ahaw ama Wasiir ahaw Shaqo kuma lihi laamiga ma mareysaan Wadooyinka kale mara , waxaana halkaan u joogaa kaliya in aan shaqadeeda ilaashado ayuu Cali Gaab ku yiri Xildhibaanada katirsan Baarlamanaka uu maanta u diiday in ay maraan Lamiga kasoo baxa Airporka Aadan Cadde sida uu Allbanaadir.com u sheegay Mid kamid ah Xildhibaanada loo diiday in laamiga maraan.
Xildhibaankan Magaciisa diiday in lasoo xigto ayaa intaa ku daray in xiliga laamiga laga celinayay ay halkaasi marayeen loona ogolaanayay Gawarai ay wateen hay’adaha Shisheeye ee Muqdisho jooga balse iyaga oo masuuliyiin qaran ah laamiga loo diiday laguna amray in ay maraan Wadooyin qardo jeex ah oo wax kasta kala kulmi karaan.
Saraakiisha iyo sidoo kale Ciidanka Dowlada ayaa lagu eedeeyaa in marraka qaar aysan tixgalin masuuliyiinta iyo madaxda katirsan Dowlada waxa ayna ula dhaqmaan sida dadka caadiga ah oo kale taa oo niyad jab ku keenta Msauuliyiinta Dowlada ee lagula dhaqmo Ficilada xun xun.
Al-Shabaab oo goob fagaare ah ku toogatay Sargaal sare oo horey uga tirsanaan jiray Kooxdaasi.
Xarakada Al-Shabaab ayaa goob fagaare ah oo kuyaala Degmada Jilib ee Gobolka Sh/Dhaxe waxa ay ku toogteen Sargaal horey kooxdaasi uga tirsanaa balse markii dambe ka goostay kuna biiray Dowlada Soomaaliya.
Sargaalkan Al-Shabaab toogteen ayaa Lagu magacaabi jiray Axmed Garaad Cali waxa uuna horey u ahaa Taliyihii Ciidamada Al-Shabaab Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Sh/Hoose xiligii uu katirsanaa Dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Qaadigii Xukunka ku riday ninkan la toogtay ayaa sheegay in Sargaalkan horey uga tirsanaa Dhankooda balse uu markii dambe ku biiray Ciidanka Dowlada uuna dagaalo kala hor yimid Kooxdooda ugu dambeyna ay gacanta ku dhigeen Sargaalkan xili uu marayay Deegaano katirsan Gobolada Jubooyinka.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale Ninkan horey uga tirsanaa balse kasoo goostay waxa ay ku eedeeyeen in Kooxdooda uu ka fidiyay Dacaayad fara badan uuna ku biiray safka Cadowga waxa ay ugu yeereen.
Goobta Ninkan lagu tooganayay ayaa waxaa kusugnaa dadweyne fara badan oo ku dhaqan Degmada Jilib iyo saraakiil katirsan Al-Shabaab , walina wax war ah kama soo bixin dhinaca Saraakiisha Dowlada oo la sheegay in ninkan la dilay uu iyagu dhankooda katirsanaa kuna soo biiray.
Dowlada oo bar Koontarool soo dhigtay Mid kamid ah wadooyinka ugu Muhiimsan Magaalada Muqdisho(Daawo Sawirada)
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa bar koontarool soo dhigay wadada dheer ee aada Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan Biyo daga oo ku dhaw Isgooska KM-4.
Bartan hada lasoo dhigay Biraha Koontarool ayaa horey waxaa u yaalay dhagxaan waa weyn oo Shub ah , waxaana ku sugan oo saldhig ku leh Ciidanka amaanka ee Dowlada Soomaaliya.
Goobtan barta koontarool hada lasoo dhigay horeryna dhagxaanta waa weyn u yaaleen waxaa ka taagan dhibatao xoogan iyadoona gaadiidka loo diido inta badan in ay maraan wadadaasi gaar ahaan kuwa ka imaanaya Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Wadada dheer ee xariirisa inta u dhaxeysa Isgooska KM-4 iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxaa horey loogu jaray oo la dhigay dhagxaan shub ah iyadoona wadada loo qeybiyay labo dhinac ay gaadiidka maraan.
Marwo Fawziya Yuusuf “Dowladda China waxa ay dib u dhiseysaa Garoonka Stadiom Muqdisho,Isbitaalka Banadir,iyo Tiyatarka“SAWIRRO”
Ra’iisul wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga H.E. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadam oo maanta Caasimadda Muqdisho dib ugu soo laabatay kadib safar shaqo oo qaatay muddo ka badan hal todobaad oo ay ku joogtay wadanka China iyada iyo wafdi ay hogaamineysay oo ay ka mid ahaayeen Wasiiru dowlaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mahdi Maxamuud Cali iyo Wasiir kuxigeenka howlaha guud ,dib u dhiska ,gaadiidka badda,dekedaha iyo tamarta Nadiifa Maxamed Cismaan , ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dowladda China ay la soo saxiixatay heshiis dhinacyo badan taabanaya , kaasoo ay qeyb yihiin dib u dhiska wadada xiriirisa Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Burco, garoonka weyn ee Stadiom Muqdisho,Isbitaalka Banaadir, Tiyaatarka iyo goobo kale .
H.E. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadam, oo Shir jaraa’id ku qabatay Airport-ka Aden Abdulle ee Muqdisho ayaa sheegtay in dowladaha Soomaaliya iyo China uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah oo soo taxnaa muddo 1000 sano ah , iyadoo Soomaaliya ay uga horeysay wadamada bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la sameeya China ,iyadoo la xasuusan yahay in Soomaaliya ay u ololeysay ,una codeysay China si ay u hesho xubinimada joogtada ee golaha amniga .
Ra’iisul wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga oo si heer sare loogu soo kala dhoweeyay Magaalada ganacsiga ah ee Shanghai,gobolka Inner Mongolia iyo Caasimadda China , ayaa waxa ay mudadii halkaasi ay joogtay ay la kala kulantay Mas’uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Ra’iisul wasaare kuxigeenka China Wang Yang , Wasiirka Arrimaha Dibadda Wang Yi iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ee dalkaas.
H.E. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadam, oo maanta ay ku soo dhoweeyeen Airport-ka Muqdisho Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Eng. Maxamed Aadan Axmed ,Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Ambasador Abdisalaam Haji Ahmed Liban,Agaasimaha guud ee habmaamuuska qaranka Adv. Hersi Haji Olosow,Aagaasimaha guud ee Maamulka iyo Maaliyadda Dahabo Omar Mohamed iyo diblomaasiyiin kala duwan oo Wasaaradda ka tirsan , ayaa mar Ra’iisul wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga la weydiiyay kaalinta Wasaaraddu ay ka qaadaneyso soo siideynta Soomaalida dibadaha ku xiran , ayaa waxa ay tiri “ Wasaaradeydu waxa ay ku howlan tahay, kalana hadashay dowlaha ay ku xiran yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed , sida Maldives , Seychelles , Kenya , Ethiopia, Yemen , Libya ,India iyo wadamo kale ,si loo siiyo xuquuqdooda sharci , lana suura-geliyo siideysmadooda, waxaa naga go’aan ah ilaalinta sumcadda iyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool”.
Diyaaradii ugu horeesay oo Nuuceeda yahay Boeing 747 oo shalay kasoo dagtay Garoonka Aadan Cadde(Sawiro)
Waxaa shalay galenke hure Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho mudo 20-sano kadib soo caga dhigatay Diyaarad Xamuul ah oo nuuceeda yahay Boeing 747 oo u kireesneed Shirkad Turkiga laga leeyahay oo Dhawaaan Dowlada Soomaaliya ku wareejisay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Diyaaradan oo aheed mid aad u weyn ayaa siday qalab kala duwan ay leedahay Shirkada laga leeyahay Dalka Turkiga ee lagu wareejiyay maamulka Garoonka Diyaaradaha iyadoona tanka ay waday Diyaaradan shalay lagu qiyaasay 70 mitirig tan oo u badan qalabkii ay ku howl gali laheed shirkadan Turkiga.
Garoonka Diyaardaha Aadan Cadde ayaa mudooyinkii dambe ku tilaabsanayay hor maro lixaad leh iyadoona dib u habeyn lagu sameeyay Laamiga ay diyaardaha kusoo dagaan iyo halka ay la duulaan.
Shirkada Turkiga ee dhawaan lagu wareejiyay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magalaada Muqdisho ayaa la filayaa in hor maro baaxad weyn ay kusameeso garoonka iyadoona horey u balan qaaday in garoonka Aadan Cadde ay u dhiseeso sida Garoomada Caalamiga oo kale.
Daawo Sawirada :Al-Shabaab oo wali Diyaar u ah in ay Dagaal la gasho Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.
Xarakada Al-Shabaab ayaa iminka ku howlan sidii ay usoo ceshan laheed awoodoodii milatari si ay mar kale dagaalo ula gasho Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM ee Dowlada dagaalka garabka ku siinaya.
Al-Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay tababaro u sameenayeen dhalinyaro ay ku dhiiriyeen in ay u dagaalgalaan kuwaa oo hada hub loo qeybiyay loona diyaariyay in ay aagaga Dagaalka tagaan si ay ula dagaalaan Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.
Dagaalyahano cusub oo kamid noqday Al-Shabaab ayaa dhawaan tababar dagaal loogu soo xiray Gobolka Galgaduud waxaana la sheegay in Ciidankaaasi ay ku biirayaan Boqolaal Dagaalyahano kale ah oo gobolkaasi hada ku sugan.
Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Xasan Yacquub ayaa sheegay Dhalinyaradan cusub ee u diyaariyeern in ay dagaal galiyaan waxa uuna ku booriyay in ay kahortagaan waxa uu ugu yeeray Cadowgooda.
Dhalinyaradan Shabaab hada dagaalka in ay galiyaan u diyaariyeen ayaa la sheegay in ay u badan yihiin dhalinyaro xoolo dhaqato ah kuwaa oo hada Shabaab baraarujin badan ay sameeyeen kadib ku guuleesteen in ay ka wataan waalidkii ay xoolaha u raaci jireen una diyaariyeen in ay dagaal galaan.
Wagi gabaxa soo wajahay R.wasaare Camaroon ayaa waxaa la’aaminsayahay in uu mugdi geliyo xariirka labada dal, iyada oo ay sidoo kale ay mushkilad ku keeni karto qaabka hogaamineed ee R.wasaaraha Ingiriiska iyada oo ay mucaaradku uga faa’iideysanayaan gulufkaan uu ku guul dareestay
War Deg Deg Ah Ciidamada Dowlada oo gacanta ku dhigay Saraakiil Cadaan iyo Soomaali isugu jira oo Shabaab katirsan.
Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan Gaashaan ayaa xalay Saqdii dhaxe ilaa saakay waxa ay Howl galo qorsheesan ay kasameeyeen gudaha Suuqa Weyn ee Bakaarah oo maalmihii dambe ay ka dhacayeen Dilal kala duwan.
Howlgalka oo ahaa mid qorsheesan ayey Ciidanku waxa ay ku galeen guryo iyo Hotelo si gaar ah loogu soo farmuuqay waxa ayna halkaasi kala baxeen tiro dad ah oo lagu tuhmayo in AL-Shabaab katirsan yihiin ama ugu yaraan uu xariir kala dhaxeeyo.
Ciidamada Gaashaan ayaa la tilmaamay in dadka ay qabteen ay ku jiraan Saraakiil katirsan AL-Shabaab oo isugu jira Soomaali iyo ajaaniib inkasto magacyadooda iyo Muuqaalkoodaba aan wali warbaahinta loo soo bandhigin walina uu yahay Howlgalka mid socda.
Taliyaha Nabadsugida Gobolka Banaadir Col. Maxamed Aadan Koofi oo la hadlay Warbaahinta Dowlada ayaa sheegay in Howlgalka lagu soo qabtay dad kabadan 20-meeyo oo lagu tuhmayo in Al-Shabaab katirsan yihiin kuna lug lahaayeen Falalka amaan daro ee Magaalada kajira gaar ahaan Suuqa Bakaarhaa.
Warbaahinta Dowlada ayaa sakaay ku warantay in Dadka la tuhmayo ee lagu soo qabtay Howlgalka Suuqa Bakaaraha ay ku jiraan Rag ajaaniib ah oon la cadeyn tiradooda iyo halka ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan.
Al-Shabaab ayaa mudooyinkii dambe waxa ay Dilal qorsheesan ka geesanayeen Suuqa Weyn ee Bakaaraha iyagoona si gaar ah bartilmaameed uga dhiganayya askarta katirsan Ciidanka Dowlada Soomaaliya.
C/Raxmaan Faroole oo fadeexo Culus raacday loona diiday in uu ka qeyb galo Xafladii Gaba-gabada ee Shirkii Adis Ababa.
Daawo Sawirada Bankiga Dhaxe ee Somalia oo maanta bilaabay mushaar bixintii ugu horeysay ee oo laga bixinayo xisaabta mashruuca loo yaqaano Special Financial Facility.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa saaka kormeer ku tegay xarunta Bankiga dhexe ee Soomaaliya, halkaasoo ay ka soconeyso bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ee hay’addaha dawladda, sida Wasaaraddaha, iyo hay’addaha.
Ugu dambeyntiina, Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa sheegay in dawladda Soomaaliyeed ay si buuxda u qaadatay isla markaana dhaqangelisay siyaasad cad oo ku aadan hagaajinta illaha dhaqaalaha
Sargaal ka tirsan ciidanka Nabad Sugida oo Xalay lagu Dilay Degmada kaxda ee gobalka banaadir.
Kooxo boskoolada ku Hubaysan ayaa Xalay waxa ay degmada kaxda ee Gobolka banaadir ku dileen Taliyahii Ciidanka Nad sugida ee Degmadaasi.
Sargaalka oo lagu Magacaabi Jiray Khaliif Sheikh ayaa kooxo Bastoolado ku hubaysan ay ku toogteen gudaha Degmadaasi, Goob jooge ku sugan Degmada kaxda ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dilka sarkaalka waxaana goobka ka baxsay ragii dilka geystay.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxahan ay toogteen Sargaalkaan ka mid ah nabad sugida durbana ay meesha isaga Baxsadeen ka dib markii ay khaarijiyeen sargaalka.
Dilka loo geestay sargaalka ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka Kaxda gaar ahaa agagaarka goobta lagu dilay.
Sikastaba dilka markii uu dhacay ayaa waxaa goobta howl-gal ka sameeyay Ciidan ka tirsan kuwa Hay,ada Nabad Sugida Qaranka waxaana ay gacanta lu soo dhigeen dad ka agdhawaa goobta uu dilka ka dhacay ee dagmada Kaxda.
Nicholas Kay oo Soo Dhaweeyay Heshiiskii Ay Dowladdu La Gashay Mamulka KMG ah ee Jubboyinka.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskii magalada Addis’ababa ay ku kala saxiixdeen Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya iyo mamulka KMG ah ee Jubboyinka.
wakiilka Qaramada Midoobay u fadhiya wadanka Soomaaliya Nicholas Key oo ku sugan magaalada Adis’ababa ee dalka Ethiopia ayaa u muujiyay beesha caalamka in dowlada Federaalka Soomaaliya ay qaadday talaabo wanaagsan oo horumar leh isagoo heshiiskii ay la gashay maamulka KMG ah ee jubooyinka ku talaabay arrin loo baahnaa.
Wakaaladda wararka u faafisa dalka Ethiopia oo wax ka qortay shirkaasi ayaa sheegtay in wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Danjire Nikolas Kay uu si weyn usoo dhaweeyay dadaalka ay dowladuu ku dooneyso in hanaanka wadahadalka u marto xaaladaha adag ee dalka ka jira.
Danjiraha Qaramada u qaabilsan Soomaaliya Nicholes Kay ayaa si weyn u taageeray go’aannadii ka soo baxay shirkii dowlada Federaalka iyo maamulka KMG ah ee jubbooyinka ku yeesheen magaalada Adis’ababa.
Sidoo kale wakiilka ayaa ka dalbaday beesha caalamka iney taageerto dadaalada dhinacyada kala duwan leh oo ay waddo dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya.
Aqriso 7-Qodob oo Faa'iido ah oo ku jira Heshiiskii ay gaareen Dowlada Somalia iyo Maamulka Axmed Madoobe.
Waaxaan cidna ka qorsooneyn in heshiisku yahay kheyr sida quraankuba noo sheegay قال تعالي والصلح خير
Hadaba waamaxay faa,iidada ugu jirta dowlada iyo shacabka soomaaliyeed intaba heshiiskaan?
Waxaa lagusoo kobi karaa faa,iidada heshiiskaan ilaa 7-qodob oo waaweyn sida :-
1-Waxaa ka faa,iidaaya 2-da dhinac ee heshiiyay dowladu wexey heshay deegaan weyn oo muhiim ah oo kusoo biiray dhulka ey ka taliso oo awooda dowladu maamul ahaan iyo meletari ahaanba ey ku faafeyso halka Sh Axmad Madoobana uu isna helay aqoonsiga dowladda Soomaaliya iyo maamulkii oo asaga gacantiisa ku jira ilaa 2-sano si sharciya hadow si saxa u shaqeeyo oo qaranimo iyo dadkasbasha ahna la hubo in dib loo dooran doono mustaqbalka.
2-In heshiiskaasu ow ilaalinaayo sharafta iyo madaxbanaanida Soomaaliya ee ey xaq u leedahay in dowladda Soomaaliya ey dalkeeda iyo dadkeeda ey toos ula heshiiso faragelinta shisheeyana meesha ka baxdo taasoo ah guul weyn oo siyaasadeed oo ey 2-da dhinac ey taaba geliyeen shacabka soomaaliyeedna laga rabo iney ugu hanbalyeeyaan.
3- Heshiiskaanu woxow albaabada u furaayaa in gobolada kale ee weli aan dadkoodu ka tashan dhismaha deegaanadooda iney wax badan ka faa,iideestaan arimaha maamul u sameynta JUBOOYINKA siiba maamul goboleedyada hadda laga diyaarinaayo gobolada dhexe ee 3-da ah sida mudug,gal guduud,iyo hiiraan. sidoo kale gobolada EX BANAADIR iyo gobolada BAY iyo BAKOOL haddaba haddii bartamaha iyo kofurta somaliya ey ka dhismaan 4-taas maamul goboleed oo hadda la yagleeyay kan jubooyinka kuwakale ee 3-da ahna faraha lagu haayao ayaa iyaduna ah tusaale wanaagsan oo maamulkaanu uu sinaayo gobolada kale.
4-Waxaa heshiiskaanu meesha ka saaraayaa shakigii laga qabay dowladda dhexe iney ogoshahay in dadku ey dhistaan maamul goboleedyo iyagu ey soo doorteen taasoo maalmahaan dadbadan oo siyaasiyiin ahu ey dowlada ku eedeynaayeen hasa yeeshee ey hadda cadaatay in tuhunkaasu meesha ka baxay dowladda Soomaaliyana ey ogoshahay in dadku madaxdooda deegaanada ey iyagu doortaan laakin ey arintaasu ahaato mid waafaqsan sharciga iyo distuurka.
5-Heshiiskaanu woxow jaanis weyn siinaayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka ah oo helaaya iney ka guuraan maleeshiyaad qabiil una guuraan ciidama qaran taasoo wax badan ka tereysa xagga nabadgelyada wadanka iyo in laga maarmo ku tiirsaanaanshaha ciidamada shisheeye iyo soo afjarida dagaalada iyo isubowda qaawinta qabaa,ilka dagaaladu ragaadiyeen taas bedelkeedana dalka loo dhiso ciidan qaran oo taya leh.
6- Waxaa laga faa,iidaayaa heshiiskaan in dadka Soomaaliyeed ee dagaaladii iyo dulmigii wadankaan ka taagnaay muddo 50 sano ka badan in laga daawoobo oo dib loogu heshiiyo wada maamulidda deegaanada leesla dego oo qabaa,ilku ey si xaq ah wax u qeybsadaan dadki sedbursiga raabayna isha la wada saaro looguna duceeyo in ilaahey iimaanka geliyo, si loo bilaabo dibu dhiska dalka iyo horumarintiisa.
7-Waxaa meesha ka baxay dowlad goboleedyo gacan ku rimis ah oo loogu talagalay in dowlada dhexe lagu wiiqo laguana arbusho sida ninki shirbay yiri (DAR ALLA LOOMA DUUBINE DAASHAA LAGU DUMIRABAA). iyadoo marmarsiimo looga dhiganaayo waa in dadka loo ogolaadaa iney iyagu dowlado qabyaalad ku dhisan oo aan dowlada dhexe shaqo ku leheyn iyo xeeraraka adalka loo dhisay taasoo ah khatar weyn oo dowladnimada iyo qaranimadaba wiiqeysa taasna hadda meesha waaba ka baxday oo waxaa la helay qaab y dadkuna maamuladooda ku dhisan karaan dowladdoodana u hoos imaankaraan.
Haddaba walaalayaal iyadoo maanta loo baahanyahay in dalka si dhaqsa ah loo yagleelo dowladnimadiisa iyo amaankiisa waa in dowladda dhexe iyo maamulkaasba loo hanbalyeeyo leeskana ilaaliyo dantaas weyn ee qaran in laga dhex akhriyo dano yar ayr ee qabiil amaba qofeed tan qarankana indhaha laga qabsado taasoo ah mid u khidmeyneysa cadawga umada iyo kuwa argagixiska ku qaraabta.
Wajigii ugu danbeeyay ee Shirkii Addis ababa oo lasoo afmeeray (Maxaa dhiman?)
Warar laga helaayo Addis Ababa ayaa waxay sheegayaan in lasoo gaba-gabeeyey Shirkii halkaasi uga socday Dowlada Federal-ka Somaliya iyo maamulka Axmed Madoobe ee Kismaayo saldhigiisu yahay.
Waxa ay intaa ku darayaan wararku in xaflad loo dhigi doono maanta oo Arbaca ah soo geba geboobida kulanka maalmaha socday si loo muujiyo in wax wanaagsan kasoo bexeen.
Qodobadii muranka dhaliyey ayaa waxaa la sheegayaa in is faham laga gaaray inta bandanna ay tanaasulaadka la yimaadeen Maamulka Kismaayo
Waxaa dhawaan la sugayaa in uu soo boxo war-murtiyeed ay ku cadyihiin qodobadii lagu heshiiyay kadib maalma xariir ah oo uu socday kulan dhex-dhexaadiyaal ay ka yihiin Ethiopia iyo urur gobaleedka IGAD.
Si kastaba, waxaa la sugayaa in heshiiskaasi oo qeyb ka qaato hanaanka geedi socodka Nabada Soomaaliya, gaar ahaan gobalada Jubooyinka iyo Gedo.
Halkaan ka aqri astaamaha ay isla leeyihiin dowlada federalka iyo maamulka Axmed Madoobe.
Iyada oo maamul kasta oo dunida ka jira uu meelaha qaar ka shabaho maamul kale ayaa waxaa jira astaamo ay wadaagaan dowlada Federalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland la magac baxay ee magaalada Kismaayo ay xaruntiisu tahay inkasta oo xagga afkaarta maamulka ay aad ugu kala fogyihiin marka laga reebo isu soo dhawaanshaha xilligaan laga soo tebinaayo magaalada Addis Ababa.
Astaanta ugu weyn ee ay wadaagaan dowlada Federalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland la magac baxay ee magaalada Kismaayo ay xaruntiisu tahay ayaa waxa ay tahay ololaha la xariira bur-burinta dhul ay sanaddo badan ku noolaayeen shacab Soomaaliyeed hadii ay noqon laheyd kuwa sharci darro ku dhisnaa iyo kuwa hada sharci darro lagu duminaayo oo shacabka leh qasab looga saaraayo
Xarunta dowlada Soomaaliya oo Muqdisho ah ayaa waxaa si xad dhaaf ah looga fuliyaa howlaha la xariira duminta dhulalka arintaas oo dad bandanna ay soo dhaweeyeen oo ay ku sheegeen ifafaale wanaagsan oo laga dheehan karo in ay soo laabaneyso kala danbeyntii halka dad kale oo u badan qolyaha dhulalka laga rarayo ay dhaliilayaan iyada oo ay suuragal tahay in dhaliishoodu ay ku saleysantahay oo kali ah dhulkaasi laga rarayo xanuunka ay ka dareemayaan.
Sidoo kale maamulka Axmed Madoobe ee Kismaayo saldhigu u yahay ayaa waxa ay waayihii danbe sidaas oo kale wadeen howlaha la xariira bur-burinta guryaha iyada oo ay isi-soo tarayeen tabashooyin ay qabaan shacabka deegaankaasi oo ku tilmaamaya arintaasi mid aan munaasib aheyn in xilligaan la qaado oo ay ka wanaagsanaan laheyd in marka hore amaanka ay wax ka qabtaan maadaama boobka, dilka iyo hagardaamooyin kale oo ay kamid yihiin kufsi iyo argagax gelin ay deegaanka kusoo bateen.
Gaari Nuuciisa aan horey loo arag markaad doontana aad laa laabi karto oo lasoo saaray(Daawo Sawirada)
Mac-hadka cilmiga Tiknolojiyadda casriga ah ee dalka South Korea, ayaa soo saaray gaari (baabuur) kii ugu horeeyay noociisa ah, waxaana suurta gal ah gaarigaan in la duuduubi karo si weyninkiisa loo yareeyo.
Gaarigaan waxaa loogu tala galay si aad u sahlan in loo adeegsado — waqtiga badan aan lagu dhamayn marka la doonayo in goob la dhigo [Parking], waxaa uuna ka fudud yahay gawaarida caadiga ah.
Waxaa xusid mudan, gaarigaan in uusan u ekeyn gawaarida la yaqo ama horay dunida looga is ticmaali jiray.
Wargeyska TG Daily, ayaa qoray gaarigaan (oo loogu magac darayArmadillo-T) weyninkiisu kala bar yaraanayo (marka la laalaabo) waxaana cabirkiisu caadi ahaan uu yahay 2.8 Mitir. Marka la isku laalaabo wuxuu noqonayaa 1.65 Mitir.
Mac-hadka sameeyay gaarigaan, wuxuu cadeeyay marka la laalaabo (gaariga) aanan loo maleyneynin gaari.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku dhawaaqay in la aasaasay Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed oo leh Xogheyn gaar ah oo dabagal ku sameysa fulinta go’aanadda Golaha Amniga Qaranka.
Madaxweynaha oo furitaankii shirkii ugu horreeyey maanta shir guddoominayey ayaa yir “ Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed waa hay’adda ugu sareysa Qaranka oo dajineysa Siyaasadda iyo Istraatiijiyada Amniga Qaranka Soomaaliyeed si loo sugo amniga iyo xaquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso amniga rayidka, gaar ahaan haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed. “
Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed waxaa shir guddoominaya Madaxweynaha Qaranka Soomaaliyeed, waxaana xubin ka ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wasiiradda Gaashandhiga, Arrimaha Gudaha iyo Amniga, Maaliyadda, Arrimaha Dibedda iyo Garsoorka. Sidoo kale waxaa xubno farsamo ka ah Taliyeyaasha Ciidamada Xoogga, Booliska, Nabadsugidda iyo Asluubta.
Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed ayaa usbuuciiba mar lagu wadaa inay kulmaan oo ay dejiyaan Istraatejiyada iyo siyaasadda Amniga Dalka. Xogheyntana laga sugayaa inay xiriirka iyo dhaqangelinta go’aanadda dabagal ku sameeyaan.
Qaraxyo qasaare kala duwan dhaliyay oo siyaabo kala duwan maanta uga dhacay Kismaayo iyo Baladweyn.
Wararka aan ka heleyno Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay Qarax miino oo lala eegtay ciidamo katirsan kooxda Raaskanbooni ee gacanta ku heysa Kismaayo.
Qaraxa ayaa la sheegay in Ciidamada lala eegtay xili ay marayeen inta u dhaxeysa Isbitaalka Kismaayo iyo saldhiga Booliiska waxaana qaraxa lala eegtay Ciidamadaasi ka dhashay Qasaarooyin kala duwan.
Inta la xaqiijiyay labo askari ayaa ku geeriyootay Qaraxaasi halka kuwa kalana uu dhaawacyo kasoo gaareen , waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay soo gaaray ciidamo katirsan Maamulka Kismaayo oo halkaasi baaritaano ka bilaabay.
Dhinaca kale Magaalada Baladweyn ayaa maanta waxaa isna ka dhacay Qarax miino oo lala eegtay Ciidamo katirsan AMISOM iyo kuwa Itoobiya xili ay marayeen xaafada Xaawo Taako .
Inta la xaqiijiyay labo qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi , waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay durba baaritaano ka sameeyay ciidamada Qaraxa lala eegtay.
Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay Masuuliyiinta Maamula Magaalooyinka Kismaayo iyo Baladweyn oo ku aadan Qaraxyadan Miino oo maanta siyaabo kala duwan uga dhacay Magaalooyinkaasi.
Baarlamaanka Soomaaliya oo jawaabtii ugu quruxda Badneed abid siiyay Cabdi Raxmaan Faroole.
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya, ayaa looga jawaabey eedeymo ku saabsanaa in wax laga badaley dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, eedeymahaas ayaa ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Warkan qoraalka ah ayaa lagu sheegey in mudanayaasha baarlamanka iyo hogaankiisaba ay ka war hayaan in qodobada qaar ee dastuurka ay is burinayaan ama iska hor imaanayaan sidaas aawadeedna ay u saareen guddi dib u eegis ku sameeya, guddigan ayaa la sheegay in la magacaabay bishii June 6 deedii, guddigaas ayaa dadweynaha u soo bandhigi doona marka ay howshooda soo gabgabeeyaan.
Waxaa kale oo waxba kama jiraan uu ku tilmaamey war saxafadeedkan in nuqulkii ugu danbeeyey ee dastuurka KMG ah lagu ansixiyey kulankii Addis Ababa ka dhacay bishii May ee sanadkii 2012ka, iyadoo uu qoraalkani sheegayo in shirkaas uu ka danbeeyey mid kale oo bishii June ka dhacay magaalada Nairobi oo ay dowladdii xiligaas jirtay iyo maamulka Puntlandba ay wakiilo ku lahaayeen guddigaas farsamo, guddigaas ayaa lagu sheegey war saxaafadeedkan in lagu magacaabay xeer madaxweyne iyagana ay u gudbiyeen guddigii ansixinta dastuurka.
Ugu danbeyntiina waxaa qoraalkaas lagu sheegay in maamulada dalka ka jira heer walba oo ay yihiin aysan wax howl ah ku laheyn dastuurka federaalka Soomaaliya, iyadoo marka ugu danbeysa dastuurkan afti dadweyne loo qaadi doono, isla-markaana ay dadweynahu yihiin kuwa iska leh go'aanka ugu danbeeya ee dastuurkan
Madaxweyne Xasan oo qabilay Wakiilada Maraykanka iyo Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya.
Kulamadaan maanta uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud la qaatay safiirrada Maraykanka iyo Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, ayaa diirada lagu saaray, qorshaha siyaasaddeed ee dowladda, waxqabadkii sannadkan iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Kulamadaan kadib ayaa Afhayeenka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Egn. C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow, waxa uu la hadlay Warbaahinta Qaranka, isagoo sheegay in Madaxweynaha kulanka hore uu la qaatay James McNulty Safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya, waxaana uu intaa raaciyey in Madaxweyna uu ergayga faah faahin ka siiyey howlihii dowladda u qabsoomay mudadii la soo dhaafay iyo arrima kale.
Sidoo kale Afhayeenka Madaxweynaha ayaa tilmaamay in laga wada hadlay sidii uu u taabogeli lahaa shir looga hadli doonno ka hortagidda Xagjirnimada, kaasi oo lagu martiqaadi doono Bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, dhinaca kale Safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya James McNulty waxa uu ballan qaaday in uu dardargelin doono taageerada Maraykanka ee Soomaaliya,.
“Waxaa jiri doono shir looga hadlayo arrimaha xagjirnimada oo lagu marti qaadi doono culumaa’udiin, iyadoo safiirku uu balan qaaday in dowladda Maraykanka ay gacan ka geysan doonto fulinta shirka, waxaa kaloo ay ka wada hadleen booqashada Madaxweynaha Soomaaliya la filayo in dalka Maraykanka uu tego bisha September” ayuu hadalkiisa ku daray Eng, Yariisoow.
Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu mar kale Muqdisho ku qaabilay Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone, islamarkaana ay ka wada hadleen shirka bisha soo socota ka dhici doona magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium.
Dowladda Soomaaliya oo sannad jirsaneysa 10-ka bisha soo socota ayaa horey ugu guuleysatay sidii ay taageero dhab ah uga heli lahayd adduunka, si Soomaaliya dib u dhiskeeda dhinacyada kala duwan loogu guuleysto, waxaana dowladda ay dadaal badan ku bixineysaa sidii shirarka calaamiga ah ee looga arrinsanayo taageerada tooska ah ee Soomaaliya uga soo bixi lahaayeen natiijooyinkii loo baahnaa.
Shiinaha Oo Dib U Dhis Ku Sameynaya Muqdisho Stadium, Banaadir Hosbital Iyo National Theater.
Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa Ballanqaaday iney dib u dhis ku sameyneyso dhowaan Golaha Murtida iyo Madadaallada National Tyater,Isbitalka Hooyada iyo Dhalaanka ee Banaadir iyo Garoonka Ciyaaraha Stadium Muqdisho kadib kulan ay Mas’uuliyiinta Shirkadaasi ay magaalada Shangahai kula qaateen Ra’isulwasaare Ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya
R/wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibada iyo iskaashiga caalimaga ah Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo wafdi ballaaran oo ay hogaamineyso oo maalmahan booqasho rasmi ah ku joogtay dalka Shiinaha ayaa waxa ay la kulantay shirkad qaabilsan dhanka ganacsiga iyo dhismaha oo dalka Shiinaha laga leeyahay.
Shirkadahaasi waxaa ugu waaweynaa shirka dhiseysa garoonka Kubbadda Cagta ee Muqdisho Studium, Tiyaatarka iyo Banaadir Hosbital, shirkadan oo sheegtay iney qaadaneyso Sadexdan Mashruuc iyagoo aan dowlada Soomaaliya waxba dhaqaale ah weydiineynin ayeey R/wasaare ku xigeenku ku dhiirigelisay iney sida ugu dhaqsiyaha badan ku dedejiyaan howlahaasi.
Shirkada ayaa waliba soo bandhigtay naqshada iyo qaabka ay doonayaan iney u hagaajiyaan Sadexdaasi dhismo taas oo aheyd mid aad u qurux badan oo soo jiidatay R/wasaare xigeenka iyo madaxdii la socotayba.
Sidoo kale shirkado kale oo ay la kulantay R/wasaare ku xigeenka ayaa dalbaday iney dib u dhis ku sameeyaan waddooyinka marka laga reebo kuwa Turkigu dhisayo.
Dowlada Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka dhinaca dhismaha aadka ugu horeya iyadoo sadexda xarumood oo ay dayactirka ku sameynayaan ay ka mid ahaayeen mashaariic ay dowlada Shiinihu hore uga hurgelisay dalkeena Soomaaliya.
Dowlada oo Gal-guduud uga dhawaaqday arin dhabar jab ku noqon karta awooda Shabaab ee gobalkaasi.
Cabdi risaaq qaliif Cilmi, abaaduulaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Guribeel ee gobalka Gal-guduud ayaa waxa uu daaha ka rogay in ay halkaasi ka hir geli doonaan talis ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay ku yeeshaan halkaasi arintaas oo aheyd mid aad loogu howlanaa waayihii danbe taaba galkeeda
“Qeybta 21 ee ciidanka xoogga dalka ayaa halkaan laga hir-gelinayaa. Saraakiishii hogaamin laheyd waa nala socdaan. Waxaana kamid ah saraakiisha nala socota kamid ah abaanduulaha iyo taliyaha qeybta 21-aad”, Cabdi risaaq qaliif Cilmi, abaaduulaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliya ayaa sidaa ku waramay.
Aasaaskaan ciidanka qeybta 21-aad ee meleteriga Soomaaliya ayaa waxa ay hormuud u noqon kartaa in hoos u dhac uu kuyimaado awooda kooxda Shabaab ee bartamaha dalka Soomaaliya, halkaasi oo kamid ah xarumaha ugu waaweyn Shabaabka ee bartamaha dalka.
Cabdi risaaq qaliif Cilmi, abaaduulaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliya ayaa waayihii danbe waxa uu waday dadaallo horay loogu qaadayo awooda wasaarada difaaca dalka Soomaaliya waxaana dad badan ay aaminsayihiin in dalka uu si hufan uga bixi karo nabad gelyada darada hadii horumarinta ciidanka qalabka sida sida ugu haboon ay u taaba gasho.
Saliid sumeysan oo lagu arkay dalka Soomaaliya iyo dhibaata badan oo ay geysatay.
Wararka laga helaayo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntiland ayaa waxa ay sheegayaan in ay jirto dhibaata ka dhalatay saliid sumeysan oo dhawaan soo gashay deegaanada Puntiland.
Saliidaan oo lagu magacaabo three star lana sheegay in ay ku jirto caag afar liitar qaad ah ayaa deegaanada ay ilaa hada dhibaatada ka geysatay ay kamid yihiin Jariiban iyo Burtunle sida ay sheegeen dadka deegaanka oo tijaaba ku sameeyay kadib markii ay ka shakiyeen.
Xoola dhaqato ku nool deegaanada Miyiga ah ku nool oo isticmaalay saliidaan ayaa waxaa la sheegay in ay ku xanuunsadeen ayna isku arkeen hunqaaco saa'id ah, waxaana wararku intaa ku darayaan in saliida uu kasoo baxaayo udug aan wanaagsaneyn.
Saliidaan ayaa waxaa la shegay in ay ka timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta iyada oo laga soo dejiyay dekada Magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari wax baaritaan ah iyada oo aan lagu sameyn.
Masuuliyiinta deegaanada uu dhibku ka taaganyahay ayaa waxa ay ka codsadeen maamulka Cabdi Raxmaan Faroole in wax laga qabto dhibaatadaan xooggan ee saliidu keentay